रित्तिंदै सरकारी ढुकुटी « Drishti News – Nepalese News Portal
गत वर्ष चैत १६ गते ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले अधिल्लो सरकारको गलत नीतिका कारण “सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ” भनेर औपचारिक रुपमा स्वेतपत्र जारी गरेर घोषणा गरेका थिए । उनले देउवा—प्रचण्ड गठवन्धन सरकारका विरुद्ध यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका थिए । तर ओली सरकारको एक वर्षको अवधीमा सरकारी ढुकुटी कति भरियो भनेर बोल्न उनले हिम्मत गरेका छैनन् । किनभने सरकारी ढुकुटी यस एक वर्षमा अझ रित्तो भएको सरकारी तथ्यांकले नै स्पष्ट गरिरहेको छ ।
यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विदेशी मुद्रा संचिति गत वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४० करोड डलरमा झरेको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्रीले भनेको रित्तो ढुकुटी भन्दा ७ प्रतिशतले घट्दा किन ओली सरकार चुप लागेर वसेको छ ? किन ढुकुटी गत वर्ष भन्दा रित्तो भयो भनेर स्वेत पत्र जारी गर्दैन ?
किनभने गत वर्ष आफैले रित्तो भएको भनी गम्भीर आरोप लगाएको भन्दा पनि ढुकुटीमा रकम घट्नु भनेको यो सरकारको गम्भीर असफलता हो । तर हाम्रा ठुला नेताहरु सरकारले विश्वलाई आश्चर्य हुने काम गरिरहेको भनेर फलाकिरहेका छन् ।
गत वर्ष देउवाको पालामा ६ महिनामा १४ करोड ३३ करोड रुपैया प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । तर यसपाली ६ महिनामा केवल ४ अर्ब ३६ करोड मात्रै भित्रिएको छ । यसमा पनि वर्तमान सरकार देउवा सरकार भन्दा असफल देखिएको छ ।
व्यापार घाटा गत वर्षको भन्दा ३२ प्रतिशतले वढेकोछ । यो पनि राज्यको लागि गम्भीर संकटको विषय हो । देउवाको पालामा गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड मात्र भएकोमा यस वर्ष ओली सरकारको पालामा पहिलो ६ महिनामा ६३ अर्ब ६८ करोड शोधनान्तर घाटा भएको छ । यो भनेको नेपालमा आउने पैसा भन्दा विदेशमा जाने पैसा ६३ अर्ब वढी भएको हो । यो भनेको गत वर्ष भन्दा पनि ओली सरकारको पालामा सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको छ ।
देउवा प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले गलत नीति लिएर सरकारी ढुकुटी रित्तो वनाएकोले बृद्ध भत्ता वढाउन नसकिएको भनि प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले वोलेका छन् । तर यथार्थता भिन्न छ । ढुकुटी रित्तो भएर होइन कि कम्युनिष्ट नाम लिएर कांग्रेस कै अर्थ नीति लिएकोले बृद्ध भत्ता सम्म पनि नवढाइएको हो यस आर्थिक वर्षको वजेटमा ।
यदि ढुकुटी रित्तो भएकोले बृद्ध भत्ता नवढाएको हो भने आउँदो वजेटमा पनि बृद्ध भत्ता वढाउन नमिल्ने तर्क आउने हुन्छ । किनभने देउवा सरकारको पालामा भन्दा अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको छ । ।
त्यो वेला र अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो हुनाको कारण सरकार संग पैसा नभएर होइन । वरु भएको पैसा विलासी गाडि, भ्यू टावर, फूलको माला, विदेश भ्रमण, अनावश्यक कर्मचारी बृद्धि आदिमा खर्च भएर रित्तो भएको हो । वजेटमा कमिशनतन्त्र हावी भएर विचौलियाहरुले र ठुलावडाले भ्रष्टाचार गरेर सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको हो ।